Rooble oo amar deg deg ah siiyey | Warkii.com
Home warkii Rooble oo amar deg deg ah siiyey
l Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan deg deg ah ugu yeeray maamulka gobolka Banaadir, kaasoo ku qabsoomay xafiiska Rooble, waxaana looga hadlay dhibaatada roobabka iyo biyaha xiray wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa faray maamulka gobolka Banaadir in si deg deg ah wax ugu qabtaan dhibaatada roobabka iyo wadooyinka biyaha xiray, isagoona sidoo kale amray in la caawiyo dadka barakacayaasha ah ee roobabka waxyeeleeyeen.
”Waxaan idinku boorrinayaa in dadka magaaladan jooga ee canshuurta bixiya ay dareemaan in canshuurtodii wax loogu qabtay”
Rooble ayaa maamulka gobolka Banaadir ku amray in dadka caasimada ku cool la siiyo adeeg u dhigma canshuurta ay bixiyaan, si ay u dareemaan in canshuurtooda wax loogu qabto.
Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa aad u saameeyay roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka degay magaalada, iyadoo wadooyinka ay xirmeen, xaafadaha qaarna loo kala gudbi karin.
Dadka Muqdisho ayaa si joogto ah u bixiya laçago canshuur ah oo bil walba laga qaado guryaha iyo goobaha ganacsiga, lamana oga halka ay ku baxdo, mana haystaan adeeg waxbarasho, caafimaad iyo mid nadaafadeed.
Previous articleXildhibanada Abgaal: Mooge-yaasha aan la moogeyn
Next articleWasiirka Warfaafinta DF oo si yaab leh ugu jawaabay dalabkii Faysal Cali Waraabe